Pakupedzisira, Kufuridzirwa neKiyi Kiyi | Martech Zone
Chipiri, May 3, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
nhasi mBlast vakatanga vhezheni, yemahara vhezheni yavo mPACT mhinduro. mPACT yakagadzirirwa kubva pasi kumusoro kubatsira vashandisi kuwana mazwi ane simba ane chekuita pamusika wavo nezvinhu zvavari kutaura mumablog, zvinyorwa zvepamhepo, Twitter, Facebook uye zvimwe zvitoro zvepamhepo.
PaMBLAST, isu tinotenda iyo chete nzira yekuyera pesvedzero yezwi iri nekutarisa pamisoro uye mazwi akakosha ayo izwi riri kunyora nezvaro. Mazhinji maFluencer-ekuzivisa maturusi pamusika anofuratira izvi zvachose, uye vanogovera generic Influencer mamaki kune vanhu vasina kana kufunga kune izvo zvavari kutaura nezvazvo kana kuti zvine hunyanzvi sei ivo pane misoro ine hanya nemusika. Zvinongova nekutsvaga mazwi ane simba achinyora pamisoro ine basa kune vateereri vedu kuti titange kunyatsoshandisa aya mazwi ane simba kuti vabatsire kuzadzisa zvinangwa zvedu zvekushambadzira. Gary Lee, CEO
Ini handina kukwanisa kubvumirana naGary zvimwe! Chiremera uye hunyanzvi hune hutongi husingatangi nemunhu, asi nemusoro wenyaya. Akawandisa masystem mazuva ano kuyera pesvedzero padanho remunhu kwete padanho repamusoro - zvichiita kuti zvisakwanise kuziva zviremera zvechokwadi. mBlast inoita kunge yakanyatsopinda mune yakakura algorithm iyo inofanirwa kubatsira kune vatengesi kunongedza vatungamiriri vemaindasitiri.
Uchishandisa sisitimu senge mPACT Pro, kambani yehukama neruzhinji kana agency yekushambadzira inogona kuona vangango vefemenzi uye kuvasvikira mikana yakanangwa inoenderana nevateereri vavo. Semuenzaniso, ini ndinogona kuda kusimudzira chiitiko - ingoisa kiyi yakakosha muchirongwa uye nekugadzira runyorwa rwevanyori, mablogiki, uye vezvenhau pundits vano chido kunyora nezve chiitiko chakadai!
Tichave tichiongorora iyo mBlast system kumberi!
Iyi ipfungwa yakanaka. Ini ndichave ndinofarira chaizvo izvo zvaunowana. Zvinonzwika sekuti iwe unonyatsomira kuseri kwechikonzero cheiyi pfungwa Iwe unomira sei paKlout izvozvi zvave zviripo kwekanguva? Kufarira kana kuvenga?
Ndakagara ndichifarira mafambiro ari kutorwa naKlout indasitiri asi zvakandinetsa kuti pakanga pasina mamiriro ezvinhanho. Nekuda kweizvozvo, ndakasarudzwa nemamwe emakambani akashandiswa naKlout kugadzira 'buzz'. Imwe yacho yaive terevhizheni show - ivo chaizvo vakanditumira bhachi uye necustom link yekubatisisa show. Dambudziko riri… Ini handitarise TV kunze kwemadocumentary nenhau. Saka - simba rinogona kunge riripo, asi kwete kukosha. mBlast inoratidzika kunge iri kudzosera mashandiro - ayo andinonyatsoda.